MiniBatt Fly uye Modular, Ultra-inokurumidza kuchaja uye modularity | IPhone nhau
MiniBatt yatakashandisa kune yayo yakakura katarogu yeisina waya majaja ayo anoenderana nechero mamiriro ezvinhu. Kubva pamabhatiri ekunze aine waya isina waya kumachaja akavanzika, uchienda kuburikidza nemidziyo yemota charger uye nekuchaja mabhesheni emhando dzakasiyana siyana.
Zvazvino zvaburitswa zveSpanish brand zvinopfuurira munzira iyi uye tipe isu zviteshi zviviri zvekukurumidza-kuchaja kusvika ku15W asi aine akasiyana maonero ekuona: modularity kana dhizaini rekubata maziso. Isu takavaedza uye tinokutaurira maonero edu.
1 MiniBatt Fly, dhizaini iyo inoenda isingaonekwe
2 Modular MiniBatt, inowedzerwa kusvika pamidziyo mitatu
MiniBatt Fly, dhizaini iyo inoenda isingaonekwe
Hazvina kufanana kutsvaga chigadziko chekuchaja petafura yemubhedha, iyo inofanirwa kuve yakangwara uye isina mwenje inopindira pakurara kwako, pane hwaro hwedhesiki rako, kwaunogona kusarudza dhizaini inokatyamadza uye mwenje weLED. Nguva zhinji isu tinofanirwa kusarudza imwe sarudzo kana imwe, zvisinei MiniBatt Fly inotipa isu tiri vaviri mune imwechete. Iyi chena yakatenderera base ine silicone pamusoro paunogona kuisa yako iPhone pasina kutsvedza, asi chinonyanya kushamisa ndechekuti ine bhuruu ye LED backlight iyo inogona kuvhurwa kana kuvharwa nekudzvanya padhesiki pachayo.
Iyo ine yakanyanya kushanda induction coil iyo inopa inosvika ku15W yemagetsi ekuchaja, chimwe chinhu icho iyo iPhone isingakwanise kutora mukana, asi inoenderana nemamwe mabrandari senge Samsung. Haufanire kunetsekana nekuti hwaro hunogadzirisa otomatiki simba rekuchaja zvinoenderana nechinhu chakaiswa Uye zvakare, hwaro hunosanganisira magetsi, saka haufanire kutenga chero chimwe chinhu, chimwe chinhu chekufunga nezvacho mumutengo: € 42,89 pane iyo MiniBatt webhusaiti (link)
Modular MiniBatt, inowedzerwa kusvika pamidziyo mitatu
Ndiyo yekutanga yekuchaja base iyo iwe yaunogona kuwedzera zvinoenderana nezvaunoda. Kusvika pamidziyo mitatu inogona kudzoreredzwa nekuda kweiyo modularity yechigadziko icho chinobvumira mamwe mabhesi maviri kuti abatanidzwe achishandisa magineti ayo ekubatanidza uye iyo yekupedzisira nzira yekugadzirisa. Kana iwe uchida kuchaja imwe, maviri kana matatu nhare mbozha, haufanire kutora zvigadziko zvese mumba mako, uye netambo imwe chete iwe uchavhara zvaunoda.
Kufanana neyekutanga yekuchaja base, ine Qi Yekukurumidza Charge kuenderana neinosvika ku15W yesimba, uye yayo matte nhema dhizaini yakangwara kwazvo. Iyo silicone iri pamusoro inodzivirira yako smartphone kana iyo kesi yaunoshandisa nayo. Kufanana nezvimwe zvakasara zvigadzirwa, ine zvese nzira dzekuchengetedza zvakafanira kuti usapisa kupisa smartphone yako kana kuwandisa mari. Mutengo wacho ndeye € 49,90 pane iyo MiniBatt webhusaiti (link) uye magetsi anowanikwawo. Tinosuwa paketi ine maviri kana matatu ekuchaja ma module anodzivirira kuve nekutenga matatu akazvimirira mabhesi.
MiniBatt inowedzera maviri matsva ekuchaja mabheseni kune ayo atove akawandisa katalog ine akasiyana maitiro. Chero iwe chaunosarudza, unosvika kusvika pa15W emagetsi ekuchaja, chimwe chinhu icho maPhones edu asingakwanise kutora mukana (iwo hwakawanda ndi7,5W) asi izvo zvinogona kubatsira kune mamwe mafoni aunogona kunge uine pamba. Kusiyana nezvimwe zvigadziko, kudziya kuri kushoma, uye chokwadi chekuti magetsi aripowo anoita mutsauko. iine mamwe mabheseni ane mitengo yakaderera zvishoma, asi kwaunofanira kuwedzera charger inoenderana Iko modularity zvakare zano rakanakira avo vanoda kubhadharisa akati wandei michina panguva imwe chete vachidzivirira kuve netambo dzinoverengeka padhesiki kana pehusiku.
MiniBatt Fly uye Modular
Modularity uye dhizaini
Yekukurumidza Charge, inosvika ku15W yesimba
Izvo hazvipe mukana wekutenga matatu ma module panguva imwe chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » MiniBatt Fly uye Modular, Ultra-inokurumidza kuchaja uye modularity